ရှေ့နေများနှင့်ကုမ္ပဏီများ Inc. မှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ဤသဘောတူစာချုပ် (“ Agreement”) တွင်“ သင်” နှင့်“ သင်၏” သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီကိုရည်ညွှန်းသည်။ “ ငါတို့”၊ “ ငါတို့”၊ “ LL” နှင့်“ ကုမ္ပဏီ” ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ရှေ့နေများလီမိတက် (ထိုအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုစီမံခန့်ခွဲ ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်သော၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးစီမံချက်များ၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများနှင့်“ ၀ န်ဆောင်မှုများ” သည်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြသည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ဤသဘောတူညီချက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှထုတ်ဝေသောသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေသောသက်ဆိုင်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖတ်ရန်သဘောတူကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည် သင်သည်အသက်ရှစ်နှစ်ကျော်သို့မဟုတ်သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိအများစု၏အသက်သို့အခြားနည်းဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီဟုသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ဤသဘောတူညီချက်အရ LL သည်သင်ရွေးချယ်ထားသောပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ရှိအခြားကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုတွင်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ကိုအသုံးပြုရန်ရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပဏာမစည်းမျဉ်းမရှိသောအမည်ရရှိနိုင်မှုရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ (ကော်ပိုရေးရှင်း၊ အကန့်အသတ်ရှိသောတာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်အလားတူအဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားများကိုဤနေရာတွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုသည်။ ) အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းအမည်မရရှိလျှင် LL သည် (သင်၏လျှောက်လွှာတွင်သင်ဖော်ပြထားသော ဦး စားပေးအစီအစဉ်အတိုင်း) အခြားကော်ပိုရိတ်ကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များသည်ရရှိနိုင်သည့်ကော်ပိုရိတ်အမည်ကိုမပေးမချင်းသင်ပေးထားသောအမည်များ။ သင့်တော်သောကော်ပိုရိတ်ဒီဇိုင်နာ (ဆိုလိုသည်မှာ“ Inc. ”၊ “ Corp. ” သို့မဟုတ်“ Corporation”) LL တွင်မပါ ၀ င်ပါက“ Inc” ကိုထည့်ပါလိမ့်မည်။ (သို့မဟုတ်အကန့်အသတ်ရှိသောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီများအတွက်“ LLC”) သင်ရွေးချယ်သောပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်နှင့်ဖြည့်ပြီးသောအခါနောက်ဆက်။
သင်ပေးထားသောကုမ္ပဏီအမည် (များ) ၏စာလုံးပေါင်းအတွက်သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ ဤနေရာတွင်ကုမ္ပဏီအမည် (များ) ကိုသင်ဆန္ဒအလျောက်စာလုံးပေါင်းထားကြောင်းသင်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုတင်သွင်းပြီးနောက်ဤတောင်းဆိုချက်သည်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်နားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်တလောနောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်းကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ရရှိနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လတ်တလောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်ဟုမအာမခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်တွင်နာမည်အားကော်ပိုရိတ်အမည်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အာမမခံပါ။ ကော်ပိုရိတ်နာမည်တစ်ခုရရှိနိုင်မှုအပေါ်မှီခိုရန် LL သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှတာဝန်မရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ သင့်အနေဖြင့်နာမည်အားအတည်ပြုပြီးကုမ္ပဏီသို့တင်သွင်းပြီးသည်အထိအစိုးရမှအတည်ပြုချက်မရရှိမှီသင်ကစာစောင်များ၊ စီးပွားရေးကဒ်များကိုမည်သည့်အရာမှမပုံနှိပ်သင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်အခြားနည်းလမ်းများမရရှိနိုင်ပါကသင်မှာယူသည့်နေ့တွင်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုရေးသားခြင်းမပြုပါက LL ကို“ Enterprises”၊ “ Holdings”၊ “ Management”၊ “ Ventures၊ နာမတျော၏အဆုံးမှ "သို့မဟုတ်" မြို့တော် "။ ထိုကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများမရရှိနိုင်ပါကသင်၏တစ် ဦး တည်းသောကုစားမှုသည် LL အားပေးဆောင်ရမည့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်အတွက်ဤနေရာတွင်ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ငွေချေးယူခြင်းအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
သင်ရွေးချယ်လိုက်သည့်ကော်ပိုရိတ်အမည်၊ သင်အမည်အားသင်အသုံးပြုသည့်အရာသည်အခြားသူများ၏တရားဝင်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖေါက်သည်မဟုတ်ကိုမစစ်ဆေးနိုင်ပါ။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သောကော်ပိုရိတ်အမည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုသည်အခြားသူများ၏တရား ၀ င်အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်ဥပဒေကျင့်သုံးရန်လိုင်စင်ရအရည်အချင်းပြည့်မီသောအကြံပေးသူအားအကြံဥာဏ်တောင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အကယ်၍ LL ကုမ္ပဏီမှငွေပေးချေပြီးနောက်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီအမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းလျှင်နာမည်စစ်ဆေးမှုမပြီးဆုံးမီ၊ LL သည်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ဒေါ်လာ ၉၅ ဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိအပြောင်းအလဲအတွက်ကုန်ကျငွေကိုလျှော့။ စုစုပေါင်းအမှာစာငွေပြန်အမ်းမည်။ အမည်စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းလျှင်၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုမဖန်တီးမှီ၊ LL သည်စုစုပေါင်းအမှာစာပမာဏကိုဒေါ်လာ ၁၂၅ ဖြင့်ပေးဆောင်ရမည်။ ဖွဲ့စည်းခြင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးပြီးနောက်အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းလျှင်၊ LL သည်အမှာစာ၏စုစုပေါင်းပမာဏကိုဒေါ်လာ ၁၉၅ ဒေါ်လာတန်ဖိုးတွက်ချက်မှုကိုပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်။ US အပြင်ဘက်ရှိကုမ္ပဏီအမှာစာသည် အကယ်၍ LL သည်ပြန်အမ်းငွေကိုခွင့်ပြုလျှင်အများဆုံးပြန်အမ်းငွေမှာဒေါ်လာ ၄၉၅ (သို့) ၀ ယ်သည့်စျေးနှုန်း၏နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက် ပို၍ ကြီးသောငွေပမာဏဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏အမိန့်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အစိုးရသို့ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း၊ တွဲဖက်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်အခြားကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အစိုးရသို့ပေးပြီးဖြစ်သော LL သို့ပေးသောငွေသည်ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပေးသည့်အခကြေးငွေများအပါအဝင်ငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
ဖောက်သည်ကိုယ်စားဖြည့်စွက်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုအစိုးရသို့ပေးပို့ပြီး (သို့) ယုံကြည်မှု (သို့) အခြားစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးသည်နှင့်အမှာယူငွေကိုပြန်အမ်း။ မရပါ။
လုံလောက်မှုမရှိသောရန်ပုံငွေများသို့မဟုတ်ပိတ်ထားသောအကောင့်များကြောင့် LL သို့ပြန်သွားသည့်ချက်အားလုံးသို့ $ 75 အခကြေးငွေထပ်ထည့်မည်။ ထို့အပြင်ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခကိုလည်းထိုစစ်ဆေးမှုများမှကောက်ခံပါမည်။
ထို့အပြင် LL သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားနေရာချထားရန်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လူတို့၏အမှားများပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်သင်၏ပါဝင်မှုတောင်းဆိုချက်၊ LLC ဖွဲ့စည်းရန်တောင်းဆိုမှု၊ ယုံကြည်မှုတောင်းဆိုချက်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှာဖွေမှုသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာပြင်ဆင်မှုတောင်းဆိုချက်သို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုမှုသည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနှောင့်နှေးခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ နေရာလွဲခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပါက၊ OR လျော်ကြေးငွေ။ LL နှင့်သင်၏တစ်ကိုယ်လုံးကုစားမှုသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများအရခွင့်ပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မည်သည့်မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းမည်။
အလျင်အမြန်အမိန့်ထားရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုမှုအတိုင်းကော်ပိုရိတ်ဖိုင်တင်သွင်းမှုကိုဖြည့်စွက်ရန်အားစိုက်ထုတ်မည်။ LL သည်သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံ၏ပြည့်စုံမှုနှင့်ပြည့်စုံမှုကိုသေချာစေရန်အားထုတ်မှုများပြုလုပ်သောကြောင့်သင်အမှာစာကိုသင်တောင်းခံချိန်တွင်တင်သွင်းမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မအာမခံပါ။ သင်၏အလျင်စလိုအမိန့်ကိုအချိန်မီမတင်သွင်းပါကသင်၏တစ် ဦး တည်းသောကုစားနည်းသည်အလုအယက်ပုံစံတင်ခြင်းအတွက်ပေးဆောင်ရသောအပိုဆောင်းအဖိုးအခများကိုပြန်အမ်းပေးမည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဖက်စ်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖုန်းဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ အင်တာနက်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ACH သို့မဟုတ်အလားတူနည်းလမ်းများဖြင့်ငွေပေးချေလျှင်သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုရှင်းလင်းပြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်မှအတည်ပြုသည်အထိသင်၏အမှာစာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရုံးဖွင့်ရက်၊ ဤအချိန်သည်ဘဏ်အပေါ်တွင်မူတည်ပြီး LL မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရန်ပုံငွေများရှင်းလင်းပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးမှသာသင်၏အမှာစာကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
LL သည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အလွန်အားထုတ်သည်။ သို့သော်တယ်လီဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အီးမေးလ်များသို့မဟုတ်အခြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများအားလုံးသည်တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းကိုမရပါ။
LL သို့အင်တာနက်၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ် (သို့) မေးလ်မှတဆင့်ပေးပို့သောအချိန်တွင်အမှာစာကိုချပေးသည်။ LL ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်အရမှ လွဲ၍ တင်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင်သင်၏အမိန့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် LL သည်ဖက်စ်မှတဆင့်သင့်ထံမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော၊ စာရေးသားတောင်းဆိုမှုကိုရရှိပြီးမှသာအမှာစာကိုပြုပြင်မွမ်းမံသည်။ အမိန့်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဘဏ္financialာရေးနှင့်အချိန်အသုံးစရိတ်များရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုများကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောစာပို့စာလက်ခံရရှိခြင်းသို့မဟုတ် https://companiesinc.com/ တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ရမည့်ပုံစံဖြင့်အစိုးရမှပေးပို့သော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုမပေးပို့မီ ၂၄ နာရီမတိုင်မှီကျွန်ုပ်တို့အားပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။ မ။ ရုံးပိတ်ရက်များအများစုသည်ရုံးပိတ်ရက်များမှနံနက် ၆း၀၀ မှညနေ ၅း၀၀ အထိဖြစ်သည်။
အချို့သောတရားစီရင်မှုများကသင့်ကိုကုမ္ပဏီသို့တင်သွင်းခြင်း (သို့) မပေးပို့မီသင့်လျော်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများတွင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူကူးထားသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မူရင်းသုံးငွေတောင်းပြေစာ၊ ဘဏ်ရှင်းတမ်းနှင့်ဘဏ်ရည်ညွှန်းစာတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်စာတမ်းများကိုမထောက်ပံ့ပေးမီအထိကျွန်ုပ်တို့မှဖိုင်တင်နိုင်သည်။ အခြားတရားစီရင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးချေသော်လည်းသင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုမပေးမချင်းသင့်ကုမ္ပဏီကိုမတင်နိုင်ပါ။ အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်တရား ၀ င်ထင်မြင်ချက်များလိုအပ်သည်။ အချို့စာရွက်စာတမ်းများကိုအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်အခြားဘာသာသို့ပြန်ဆိုရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဤအပိုဆောင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အခကြေးငွေများရှိပါကသင်သည်ထိုသူတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အစိုးရနှင့်အေးဂျင့်စသည့်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရပြီး၎င်းအခကြေးငွေများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ သင်အနေဖြင့်သင်သည်တောင်းဆိုမှုမည်သို့ပင်ရှိပါစေလိုအပ်သောလုံ့လဝီရိယရှိသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုပေးအပ်ရန်သင့်တွင်တာဝန်ရှိကြောင်းသဘောတူထားပြီးသင်ကသင့်လျော်သောလုံ့လဝီရိယရှိသည့်ဥပဒေကိုမလိုက်နာပါကငွေပြန်အမ်းခြင်းမရရှိနိုင်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုဆိုသည်မှာအောက်ပါတို့မှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသည်။ (၁) စာရွက်စာတမ်းများကိုအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုမှတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းအတွက်လက်ခံသည်သို့မဟုတ် (၂) အမိန့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသာမာန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ သို့မဟုတ် (1) အမိန့်န်ဆောင်မှုများဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အထက်ပါအချက်များသည်မည်သည့်အမှာစာတွင်မဆိုမှန်ကန်မှုရှိပါက၊
သီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကုန်သွယ်မှုနှင့်သင့်တော်မှုရှိခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း (သို့) အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းရှိသည့်အာမခံချက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မှဖော်ပြသည်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုများသည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံချက်များကိုချန်လှပ်ထားခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ (သို့) အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးပြီး (သို့) တင်သွင်းပြီးနှင့် (သို့) သင့်အားလွှဲပြောင်းပြီးသောနောက်တွင်အစိုးရသို့မဟုတ်အခြားအခကြေးငွေများထပ်မံပေးဆောင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနီဗားဒါးသည်ကော်ပိုရေးရှင်းတင်သွင်းပြီးမကြာမီတွင်အရာရှိစာရင်းကိုတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤရေးသားခြင်း၏အဖြစ်ဖိုင်တင်ကြေး $ 150 ပေါင်းတစ် ဦး $ 500 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အခကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောပမာဏဖြင့်နှစ်စဉ်ကြိုတင်ငွေဖြည့် franchise အခွန်များရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သက်ကြီးရွယ်အို / ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ၀ ယ်ခဲ့ပါကသင်ဝယ်ယူသည့် နေ့မှစ၍ မကြာမီသက်တမ်းတိုးခကိုပေးရပါမည်။ ဤအခကြေးငွေများသည်ကုမ္ပဏီ၏ကန ဦး တင်သွင်းမှုအပေါ် မူတည်၍ မဟုတ်သောကြောင့် LL သည်ပုံမှန်ကန ဦး ပုံစံတင်ပို့ခအတွက်ဤနောက်ဆက်တွဲဖြည့်စွက်မှုလိုအပ်ချက်အတွက်သင့်အားမတောင်းခံနိုင်ပါ။ သင်၏ကုမ္ပဏီ (သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်းအားပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံတွင်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲပြည်နယ်၊ နိုင်ငံ၊ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားအခကြေးငွေများကိုသတ်မှတ်ထားသောနေ့မတိုင်မှီအကျုံးဝင်လိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တရား ၀ င်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အရစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ LL သည်သင်၏တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုသက်တမ်းတိုးရန်အတွက်ငွေတောင်းခံပါကသတ်မှတ်ထားသောနေ့မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာထိုသို့သောကြောင့်ကုမ္ပဏီများအားဒဏ်ငွေများ၊ နောက်ကျကြေးများ၊ စောစီးစွာငွေတောင်းခံခြင်းကအစိုးရနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအားနောက်ကျခြင်းမှနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များမှတားဆီးရန်ကူညီပေးသည်။ သင်၏တရားဝင်တာ ၀ န်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာသင်၏တာ ၀ န်မဟုတ်ဘဲ LL ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ဂေါပကနှင့်အစိုးရအခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုများအတွက်သက်တမ်းတိုးခများရှိပါသည်။ ဤရေးသားမှုအရမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၉၉ နှင့်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၄၅ ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းတိုးသည့်အခကြေးငွေများသည်အခြားနိုင်ငံများ၌ကွဲပြားသည်။ သင်၏သက်တမ်းတိုးကြေးကိုအစိုးရနှင့်မပေးဆပ်ပါနှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်အစိုးရ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေသည် (ဝေါဟာရများကို မူတည်၍ ပြည်နယ်နှင့်ကွဲပြားသည်) ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်ကုမ္ပဏီအားမလိုတော့ကြောင်းသင်၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် LL အားအခြားနည်းဖြင့်အကြောင်းမကြားပါကစီမံခန့်ခွဲရေးမှရေးသားထားသည့်အသိအမှတ်ပြုသည့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေသည့်အနေအထားမတိုင်မီတွင် LL အားသင်ကုမ္ပဏီအားသက်ကြီးကုမ္ပဏီအဖြစ်ရောင်းရန်မလိုတော့ကြောင်းဖော်ပြရန်၎င်းအမည်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်။ ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုပြန်လည်။
အချို့သောပြည်နယ်ဥပဒေများအရကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုသတ်မှတ်ထားသောသတင်းစာတွင်ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ LL သည်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုအရ၊ ဤလုပ်ငန်းကို ၀ န်ဆောင်မှုခံသူ၊ အထူးသဖြင့်အဖွဲ့အစည်း၏စည်းရုံးရေးမှူးသို့မဟုတ်စည်းရုံးရေးမှူးများလိုအပ်လျှင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိဖော်ပြချက်များ“ စျေးနှုန်းတွင်လိုအပ်သောထုတ်ဝေခများပါ ၀ င်သည်” ဟူသောဖော်ပြချက်သည်ထည့်သွင်းသူသို့မဟုတ်စည်းရုံးရေးမှူးမှလိုအပ်သည့်နေရာကိုဆိုလိုသည်။ နယူးယောက်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ဝေရန်လိုအပ်ချက်များအပါအဝင် LL သည်အချို့သောပြည်နယ်များရှိထုတ်ဝေခအခကြေးငွေများကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ နယူးယောက် LLC ကိုဖွဲ့စည်းရန်တောင်းခံပါကထိုထုတ်ဝေမှုလိုအပ်ချက်များသည် LLC ၏ကန ဦး ဖွဲ့စည်းမှုထက်များစွာ ပိုမို၍ အကုန်အကျများနိုင်ပြီးသင်သည်ဤအခကြေးငွေများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။
LL သည်အင်တာနက်ထုတ်ဝြေခင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများသည်အထွေထွေလျှောက်လွှာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များပါဝင်ပြီးရှေ့နေ၏အကြံဥာဏ်ကိုအစားထိုးရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများမှာအမြဲတမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်။ ထို့အပြင်ဥပဒေများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များဖွင့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခါသင်သည်သင်၏ရှေ့နေအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ LL သည်သင်၏“ ထည့်သွင်းမှုအတွက်တောင်းဆိုခြင်း” သို့မဟုတ်“ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း” တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ လိုအပ်သောပုံစံများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီးလိုအပ်သောပုံစံများကိုသင့်လျော်သောပြည်နယ်၊ သင့်အားဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအားဖြင့် LL၊ ၎င်း၏အကြံပေးများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်မည်သည့်ဥပဒေ၊ အခွန်သို့မဟုတ်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမျှမပေးဘဲတရားဝင်သို့မဟုတ်အခြားအကျိုးဆက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံချက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသည်။
LL၊ ၎င်း၏အကြံပေးများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်ဥပဒေကျင့်ထုံးများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။ သင့်အားဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်များမပေးနိုင်ပါ။ LL သည်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုများကိုအသုံးချပြီးသင်ကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြနေသောသတင်းအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်သဘောသဘာဝကိုလေးစားသော်လည်း၊ LL နှင့်သင်အကြားအထူးဆက်သွယ်မှု (သို့) အခွင့်ထူးတစ်ခုမရှိပါ။ သို့သော်လိုင်စင်ရရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျှင်တည်ရှိကောင်းပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ရှေ့နေ - ဖောက်သည်ကြားဆက်ဆံရေးတွင်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ။
အကယ်၍ သင်သည် LL နှင့်ဆက်နွယ်သောရှေ့နေနှင့်စကားပြောဆိုပါကမည်သည့်အမှုသို့မဟုတ်အခြေအနေအတွက်မည်သည့်အရာအားဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်အဖြစ်မယူသင့်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ LL နှင့် / သို့မဟုတ်တွဲဖက်ရှေ့နေများသည်ယေဘုယျအချက်အလက်များကိုသာပေးသည်၊ အခွန်အကြံပေးများမဟုတ်ပါ။ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေ၊ အခွန်သို့မဟုတ်လိုက်နာမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြံဥာဏ်များကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ လွတ်လပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ရယူရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ LL ဖန်တီးထားသောအဖွဲ့အစည်းအများစုသို့မဟုတ်အားလုံးသည်အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီး၊ ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှဖြစ်စေ၊ ၀ င်ငွေရရှိသည့်မည်သည့် ၀ င်ငွေသည်မဆိုဤကဲ့သို့သောရန်ပုံငွေများကိုကုမ္ပဏီမှထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်ပို့ခြင်းများရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ။ နောက်ထပ်, LL နှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများနှင့် / သို့မဟုတ်ရှေ့နေ (များ) မှရရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, ဆွေးနွေးခြင်း, လက်ခံရရှိ, ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားညွှန်ကြားရေးမှူးသို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်အပြန်အလှန်ဖွဲ့စည်းမထားဘူး, ရှေ့နေ - client ကိုဆက်ဆံရေးနှင့်ပေးဆောင်မဆိုအခကြေးငွေ တရားဝင်အခကြေးငွေအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မရှိကြပါ။
အရေးကြီးသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနည်းတူ LL, ၎င်း၏အကြံပေးများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများကသင်၏ကော်ပိုရေးရှင်း၊ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥပဒေကျင့်သုံးရန်လိုင်စင်ရရှေ့နေတစ် ဦး နှင့်သက်ဆိုင်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိလိုင်စင်ရ CPA နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်သင့်အားအခိုင်အမာတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအခြားထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏ဆက်လက်လည်ပတ်မှု။
သင်ရွေးချယ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားသက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှု (များ) အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်သင်သဘောတူသည်။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောပေးဆောင်ရမည့်အခကြေးငွေများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ မှလွဲ၍ ကျန်မဟုတ်လျှင်ပြန်အမ်းမရနိုင်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါသင်သဘောတူသည် - (၁) လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်မှလိုအပ်သည့်အတိုင်းသင်၏လက်ရှိ၊ ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့် (၂) ဤအချက်အလက်များကိုလက်ရှိ၊ ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်အားလုံးကိုအကောင့်အချက်အလက် (“ အကောင့်အချက်အလက်”) ဟုရည်ညွှန်းသင့်သည်။
သင်သည်ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားထိုကဲ့သို့သောအကောင့်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးတင်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏လျှောက်လွှာရှိအကောင့်အချက်အလက်သည်မှန်ကန်ကြောင်း၊ ရွေးချယ်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်သင်သိသည်အတိုင်း၊ တတိယမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိကြောင်းသင်ကိုယ်စားပြုသည်။ ပါတီ။ ကုမ္ပဏီအမည်ကိုတရားမဝင်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်ကိုယ်စားပြုပါသည်။
သင်ရွေးချယ်သောပုံစံ၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံမှခွင့်ပြုထားသောအစုရှယ်ယာအများဆုံးအရေအတွက်ထက်ပိုသောသင်၏စာရင်း ၀ င်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေထဲတွင်ခွင့်ပြုထားသောအစုရှယ်ယာများတောင်းခံပါကသင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်နှင့်အားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ။ အစုရှယ်ယာများနှင့် / သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းစတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများတိုးပွားလာပါကအချို့သော၊ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ၊ ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံမှခွင့်ပြုထားသောအနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာအရေအတွက်ကိုစုံစမ်းရန်မှာသင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ သင်၏စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးများတွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာအရေအတွက်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ရွေးချယ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားနည်းဖြင့်သင်မညွှန်ကြားပါကထုံးတမ်းစဉ်လာနံပါတ်များသည်ကွဲပြားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုတွင်မတူညီပါကသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာအနည်းဆုံးဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်း မှလွဲ၍ ပုံမှန်စတော့ရှယ်ယာဖွဲ့စည်းပုံသည်အစုရှယ်ယာ ၁၅၀၀ ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားလိုပါက LL သည်စာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရရုံးသို့တင်ပြသည်။ LL သည်စာရွက်စာတမ်းများကိုအစိုးရရုံးမှပြန်လည်လက်ခံရရှိပါက LL သည်သင်မှာယူခဲ့သည့်အထုပ်နှင့်အညီစာရွက်စာတမ်းများကိုသင့်ထံသို့ပေးပို့သည်။ LL ရုံးမဟုတ်ဘဲအစိုးရရုံးသည်ကုမ္ပဏီစာရွက်စာတမ်းများကို LL သို့ပြန်ပို့ပေးသည့်အချိန်ကာလကိုထိန်းချုပ်သည်ကိုသင်သဘောတူသည်။
ကုမ္ပဏီတင်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင်အမိန့်နှင့်အတူကော်ပိုရိတ်ကိရိယာအစုံသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ပါရှိလျှင်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုအစိုးရမှအတည်ပြုပြီးမှထုတ်လုပ်မည်။ (ဒါကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကတော့အစိုးရကနာမည်ပေးပြီးအစိုးရကပယ်ချခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့ကိရိယာအစုံတစ်ခုမဖန်တီးနိုင်အောင်ကော်ပိုရိတ်ကိရိယာကိုမှာယူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ )
LL သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမဆိုသင့်အားအကြံပေးခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သတိပေးခြင်းအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သို့သော်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ၊ အခွန်ပုံစံများ၊ အခွန်များ၊ သို့မဟုတ်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်၊ မင်းကိုပေး ဤစာအရေးအသားအနေဖြင့်ယူအက်စ်တွင် ၃၀၀၇ သည်ပုံစံတင်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်အခကြေးငွေအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တိုင်းနှင့်အခြားတရားစီရင်မှုအရေအတွက်နှင့်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စည်းမျဉ်းများကြောင့်, သင့်ရဲ့ခရိုင်, စီရင်စုနယ်, ပြည်နယ်, တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဖိုင်အခ, အခွန်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုသုတေသနပြုရန်သင်၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင် LL ၏ပါ ၀ င်မှုသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးသည့်အချိန်တွင်အဆုံးသတ်သွားမည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားများသည် LL ၏တာ ၀ န်မဟုတ်ပါ။ သင်၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ အကယ်၍ သင် LL အားထိုသို့ပြုရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိပါကသင်၏ကော်ပိုရေးရှင်း၊ LLC သို့မဟုတ်အခြားကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ထုတ်ဝေမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအားလုံးသည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အခန်း S ကော်ပိုရေးရှင်းရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေအတွက်ဖိုင်တင်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ S-Corporation အခြေအနေလျှောက်ထားရန်ပုံစံကိုသင်၏ကုမ္ပဏီမှအရာရှိတစ် ဦး ကလက်မှတ်ထိုးရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အရာရှိမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပုံစံကိုလက်မှတ်ထိုး။ file မလုပ်နိုင်ပါ။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်အရာရှိ / ဒါရိုက်တာ / မန်နေဂျာများ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ထားသည့်တိုင်သင့်လျော်သောပါတီမှစာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောပုံစံကိုတင်ပြရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျောက်ဆုံးနေသောသို့မဟုတ်နောက်ကျသောအခွန်ပုံစံများသို့မဟုတ်အခြားပုံစံများ၊ လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အရေးမယူမှုများအတွက်တမင် ရည်ရွယ်၍ လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ LL သည်စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပုံစံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခွန်နှင့်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကိုရှေ့နေများနှင့်စာရင်းကိုင်များအနေဖြင့်လိုင်စင်ရ၊ ဗဟုသုတ ရှိ၍ လက်တွေ့ကျင့်သုံးသောအဖွဲ့ဝင်များမှရယူသင့်သည်။
အကယ်၍ အပိုဆောင်းအခကြေးငွေအတွက်သင်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၌သင်တို့၏အကူအညီကိုတောင်းခံပါကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်က LL သည်ဘဏ်မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်သည့်အခါကမှထိန်းချုပ်မည်မဟုတ်၊ မည်သည့်ဘဏ်များကသင်လိုချင်သည့်စာရင်းအမျိုးအစားကိုဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ်ပါကလိုအပ်သောဘဏ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ရာ၌သင်၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုမထိန်းချုပ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ LL သည်မဟုတ်ဘဲဘဏ်သည်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည့်သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်မည့်မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ သင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းလျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ဘဏ်မှတောင်းခံထားသောအချက်အလက်များအားလုံးကိုစာရင်းဖွင့်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုသင်သဘောတူသည်။
LL သည်ဘဏ်ပေါ်လစီများနှင့်အခြေအနေများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းစွာကိုင်တွယ်ရန်သင်သဘောတူသည်။ သို့သော်ကန့်သတ်မထားသော - ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းကိုငြင်းဆန်ခြင်း၊ သင်အလိုရှိသည်ထက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်အချိန်ပိုယူသောဘဏ်၊ ဘဏ်၏မူဝါဒအပြောင်းအလဲ၊ အဆင်ပြေစွာလမ်းလျှောက်နိုင်သည့်ဘဏ်တစ်ခုနှင့်ဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ဘဏ်သို့လမ်းလျှောက်မည့်အစားစာတိုက်ဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ယူခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သုံးစွဲသူ၏အလိုရှိမှု၊ ဘဏ်တွင်အသုံးပြုသောနိုင်ငံခြားဘာသာစကား၊ ဘဏ်သည်သုံးစွဲသူအလိုရှိသည့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုပေးအပ်ခြင်းမပြုသော်လည်းဘဏ်မှငွေကိုငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အကြွေးသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ရှိနေခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းသို့မဟုတ် အကောင့်ကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီသင်ကိုယ်တိုင်ဘဏ်သို့ကိုယ်တိုင်သွားရန်လိုအပ်သောဘဏ်။ အကယ်၍ ဘဏ်သည်ခရီးသွားလာရန်လိုအပ်ပါကခရီးသွားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးအတွက်သင်အပြည့်အ ၀ တာ ၀ န်ရှိသည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုသည်ဖောက်သည်အတွက်အဆင်ပြေသည့်ဘဏ်ခွဲများမရှိသောဘဏ်တစ်ခုတွင်သို့မဟုတ်ဘဏ်ခွဲမရှိသောဘဏ်တစ်ခုတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤသည်မှာ LL သည်သင့်အတွက်ဖွင့်ပေးနိုင်သောအကောင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါက LL သည်၎င်း၏တာဝန်ကိုကျေပွန်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်။ မရသောကြောင့် (သို့) သင်ရွေးချယ်သောဘဏ်များအားစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက LL သည်ဘဏ်စာရင်းအပြင် ၀ ယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခကြေးငွေအားလုံးကိုပြန်အမ်းရန်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှတာဝန်မရှိပါ။ သင်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အမိန့်ပေးဆက်နွယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်နှောင့်နှေးမှုကြောင့်အရေးကြီးသောသတ်မှတ်ရက်ကျော်သွားခြင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည့်တိုင်ဤကိစ္စသည်ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်က LLC နှင့်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကိုမှာယူပြီးသင်၏ရွေးချယ်ထားသောဘဏ်သည်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပါက LL သည်၎င်း၏ရွေးချယ်မှုအရ LL account အနေဖြင့်ဘဏ်အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပေးဆောင်ရသည့်အခကြေးငွေကိုသာပြန်အမ်းရန်ဖြစ်သည် အပိုဖွင့်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်အချိန်ပိုပေးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဘဏ်တစ်ခုအတွက်သင့်အားပေးအပ်ခြင်း။ LL သည်ဘဏ်များအားတည်ငြိမ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးသင့်တင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်ဟုသင်ထင်မြင်ခြင်းမရှိဘဲဘဏ်များဖွင့်လှစ်မည့်ဘဏ်များကိုရှာဖွေရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ သင်၏ဘဏ်စာရင်းလျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်၊ လိုအပ်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်ဘဏ်တောင်းဆိုသည့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးရန်မှာသင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားတရား ၀ င်နှင့်ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါကဘဏ်သည်၎င်း၏လိုင်စင်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဘဏ်များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိသောလိုအပ်ချက်များအတွက်ခြွင်းချက်များပြုလုပ်သောကြောင့်လူသိများခြင်းမရှိပါ။
ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ချက်များတွင်အကောင့်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်း၊ လက်မှတ်ကဒ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ၊ သင်၏လူနေအိမ်လိပ်စာပါရှိသောမူရင်းလုပ်ငန်းသုံးငွေတောင်းခံလွှာ၊ သင်၏ကုမ္ပဏီစာရွက်စာတမ်းများ၊ ဘဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရည်ညွှန်းချက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ အက္ခရာနှင့်ဘဏ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအခြားလိုအပ်ချက်များ။ ဘဏ်သည်စာရွက်စာတမ်းများ၏စစ်မှန်မှုကိုအတည်ပြုရန်မကြာခဏဖုန်းခေါ်မည်။ LL ဘဏ်အားသင့်အားဘဏ်အမည်များပေးအပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အားအများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆပြီးဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုသင့်အားပေးရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် LL သည်ဤသဘောတူညီချက်အရ၎င်း၏တာ ၀ န်ကိုပြည့်စုံစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အပို ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမှာယူပါကထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုကိုအမိန့်ပေးလျှင်၊ ဥပဒေကသင့်အားမူလမှတ်ပုံတင်နှင့်အညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ဥပဒေကတောင်းဆိုနိုင်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ၏မူလစာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစွာလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်မူရင်းစုံစုံကိုသင်လိုအပ်နိုင်သည်။
Trusts, အိမ်ခြံမြေ & စာရွက်စာတမ်း
ငွေခဝါချခြင်းနှင့်တရားမ ၀ င်ငွေကြေးရန်ပုံငွေများခိုးယူခြင်းများကိုတားဆီးရန်ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများချမှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိဂေါပကများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အခြားသူများသည်ဤစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်သင့်လျော်သောပါတီများကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်ပြီးထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်သောအခါအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုသင့်လျော်သောပါတီများသို့လွှဲပြောင်းပေးရမည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဖြည့်ဆည်းရမည့်သိသူ - စားသုံးသူလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ Trustee သည်ယေဘုယျအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုခြွင်းချက်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဒဏ်ငွေနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ဖောက်သည်များထံမှလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံး၏စာရင်းဖြစ်သော်လည်းသေချာသည် - Client Assessment Data Form, Solvency of Affidavit, ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်အထောက်အထား၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်း၊ The Money အဝတ်လျှော်ထိန်းချုပ်ရေးအက်ဥပဒေ၊ လျော်ကြေးပေးအပ်ခြင်း၊ သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ဓာတ်ပုံစာမျက်နှာမိတ္တူတစ်ခု (သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်သင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူတစ်ခုလုံလောက်သည်) သင့်ကိုသင်၏မှတ်ပုံတင်ကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ (မူရင်းမကြာသေးမီဖြစ်ရမည်။ Utility bill၊ credit card statement သို့မဟုတ် bank statement သည်မိတ္တူကူးခြင်းထက်မူရင်းဖြစ်ရမည်။ အထက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းအချို့ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ၊ ကုန်ပစ္စည်းငွေတောင်းခံလွှာ (သို့မဟုတ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) နှင့်ဘဏ်ရည်ညွှန်းစာတစ်စောင်ကိုပေးရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုနမူနာပြရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်အခြားစာရွက်စာတမ်းများမလိုအပ်ကြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အာမခံချက်မရှိပါ။
မြေယာယုံကြည်မှု၊ သက်ရှိယုံကြည်မှုနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများအပါအ ၀ င်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်စာရွက်စာတမ်းများအပြင်ကန့်သတ်ချက်များမရှိခြင်း၊ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်မပေးမီကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောအလုပ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုစာရွက်စာတမ်းများထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းရန်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ဤပြန်လည်ကုစားနိုင်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုန်သည်အကောင့်များသည်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ပေးချေသောသင်၏ဖောက်သည်များအားငွေပေးရန်အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခကြေးငွေထပ်မံတောင်းခံပါကခရက်ဒစ်ကဒ်ကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၌သင်တို့၏အကူအညီကိုတောင်းခံပါကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်အကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် LL သည်ကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီမှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဈေးနှုန်းများ၊ မည်သည့်ကုန်သည်များကသင်နှစ်သက်သောစာရင်းအမျိုးအစားကိုဖွင့်မည်၊ မဖွင့်မည်ကိုမထိန်းချုပ်ဘူး၊ LLL မဟုတ်ဘဲကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီသည်ကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်လှစ်မည့်သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်မည့်မြန်နှုန်းကိုသင်သဘောတူသည်။ ကုန်သည်အကောင့်လျှောက်လွှာကို၎င်း၏အကောင့်တစ်ခုလုံးကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက်တောင်းဆိုသောအချက်အလက်များအားလုံးကိုပေးရန်သင်တွင်တာဝန်ရှိကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
LL သည်ကုန်သွယ်မှုစာရင်းသွင်းခအခကြေးငွေများသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်များကိုအာမခံမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးနောက်ကုန်သည်စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီမှဤကတိကဝတ်ကိုပြုလုပ်သည်။ MERCHANT ACCOUNT COMPANY ကုမ္ပဏီမှကောက်ခံသောအခကြေးငွေများအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
LL သည်ကုန်သည်အကောင့်ပေါ်လစီများနှင့်အခြေအနေများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းစွာကိုင်တွယ်ရန်သင်သဘောတူသည်။ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်မရှိသော်လည်း - အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းကိုငြင်းဆန်သည့်ကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီ၊ သင်အလိုရှိသည်ထက်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်အချိန်ပိုယူသောကုန်သည်အကောင့်တစ်ခု။ ဘဏ်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သောကန ဦး အပ်ငွေ၊ မူဝါဒအပြောင်းအလဲ၊ သင်နှစ်သက်သောနှုန်းထားများဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုသင်သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များဖြင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီမဖွင့်မီအချက်အလက်များကိုပိုမိုတောင်းခံသောကုမ္ပဏီ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်နှုန်းထားများ၊ ဝန်ဆောင်ခများ၊ နှုန်းထားများ၊ ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်၊
အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုသည်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုပုံမှန်နှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်စွန့်စားရမှုအလွန်ကြီးသည်ဟုခံစားရသည်ဖြစ်စေ၊ client တွင်သန့်ရှင်းသောသမိုင်းကြောင်းသို့မဟုတ်သမိုင်းကြောင်းရှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်စီးပွားရေးကို“ မြင့်မားသောစွန့်စားမှု” အမျိုးအစားဟုမှတ်ယူလျှင်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။ အကယ်၍ ဤသည်မှာ LL သည်သင့်အတွက်ဖွင့်ပေးနိုင်သောအကောင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါက LL သည်၎င်း၏တာဝန်ကိုကျေပွန်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
LL သည်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုန်သည်အကောင့်အပြင် ၀ ယ်ယူသည့်နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ရမည့်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပေးရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီသည်ဖွင့်လှစ်။ မရသောကြောင့်သို့မဟုတ်ကုန်သည်စာရင်းကုမ္ပဏီများ၏ရွေးချယ်မှုကိုသင်မကျေနပ်ပါက ။ သင်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခရက်ဒစ်ကဒ်ကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်းကြောင့်အရေးကြီးသောသတ်မှတ်ရက်ပျက်ကွက်လျှင်ပင်၎င်းသည်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ သင်ကကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုနှင့်ကုန်သည်အကောင့်တစ်ခုကိုမှာယူပြီးကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီမှအမှာစာကိုဖွင့်ရန်ငြင်းဆန်သည်သို့မဟုတ်သင်ဆန္ဒထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားများကိုကောက်ခံပါကတစ်ခုတည်းသောဆေးမှာ LL အတွက်အခကြေးငွေ၏ထိုအပိုင်းကိုသာပြန်အမ်းရန်ဖြစ်သည် LL deems သည်ကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသောအခကြေးငွေနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ အိတ်ဆောင်ကုန်ကျစရိတ်များမှလျော့နည်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကုန်သည်အကောင့်ရွေးစရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကုန်သည်စာရင်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်ပေးရသောအခကြေးငွေကိုတတိယပါတီများသို့ ပေး၍ ပေးချေရသဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး တည်ထောင်ရန်ပေးရသောအခကြေးငွေမှာအပြည့်အဝပြန်အမ်းမရ။ LL သည်စီးပွားဖြစ်အကောင့်ကုမ္ပဏီများအားရှာဖွေရန်အတွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ အကျိုးအမြတ်နည်းသော၊ အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေစာရင်းများကိုဖွင့်လှစ်နိုင်လိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်အကောင့်ကုမ္ပဏီများ၏အမည်များကို LL အားပေးပြီးကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းမှုများအားထောက်ပံ့ရန်အားထုတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် LL သည်ဤသဘောတူညီချက်အရ၎င်း၏တာ ၀ န်ကိုပြည့်စုံစေသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်စ်နံပါတ်နှင့်လိပ်စာများပါ ၀ င်သည့်ရုံးအစီအစဉ်ကိုသုံးစွဲသူအဆင်ပြေစေရန်သာကမ်းလှမ်းသည်။ ရုံးသုံးပရိုဂရမ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သည်များသောအားဖြင့်များစွာသောကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြေကြားပေးသောတယ်လီဖုန်းလိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ခေါ်ဆိုသူသည်သူတို့ခေါ်နေသောကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုထားရမည်။ သို့မှသာမည်သူ့ကိုသတင်းပို့ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိလိမ့်မည်။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ ဖက်စ်များ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ ၀ န်ဆောင်မှုစတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် LL သည်ရုံးအစီအစဉ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအပြည့်အ ၀ ပေးဆောင်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ။
ကော်ပိုရေးရှင်းချေးငွေ & အသက်အရွယ် / ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည် ၀ ယ်သူအားကုမ္ပဏီ၏တာ ၀ န်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏လက်ခံနိုင်သောအသုံးပြုမှုပေါ်လစီနှင့်အတိုင်းအတာနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သဘောတူညီချက်၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ် ဦး တည်းသောအပြီးသတ်အနုညာတစီရင်ဖြစ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်သည်ဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာရန်သဘောတူသည်။
အမှာစာရှိလျှင်ကုမ္ပဏီသည်ကော်ပိုရေးရှင်း (သို့) ကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီအားဝယ်သူအားပေးလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီသည်သုံးစွဲသူအားအီးမေးလ် (သို့) စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူသူများကိုကြိုဆိုသော packet တစ်ခုပေးမည်။ ၀ ယ်ယူသူသည်ကြိုဆိုသည့် packet ကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီသို့မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရန်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်လျှောက်လွှာနှင့် (သို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုရည်ညွှန်းသည်) ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကုမ္ပဏီသို့ပြန်ရောက်သည်နှင့်ကုမ္ပဏီသည် Dun & Bradstreet သို့သတင်းအချက်အလက်များကိုရည်မှန်းချက်ဖြင့်တင်ပြမည်၊ :
၂။ အကယ်၍ သင်သည်အမြန် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ပါကကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ယင်း၏တွဲဖက်များမှခရက်ဒစ်အစီရင်ခံခြင်းအေဂျင်စီ (များ) သို့အမြန်ငွေပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ချေးငွေတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်ဆန်စေသည်။
၃။ Dun & Bradstreet (D&B) အစုစုနှင့်အကောင့်တစ်ခုပေးပါ။
၄။ အဓိက D&B ၏ချေးငွေအစီရင်ခံစာ ၆ ခုကိုဖန်တီးပါ။
၅။ အစီရင်ခံစာ ၆ ခုတွင် D&B ရမှတ်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖန်တီးပါ။
၆။ D&B ရမှတ်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖန်တီးရန်သူတို့တောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာများသို့တင်ပြပါ။
၇။ ဖောက်သည်အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကုန်သွယ်ရေးကိုးကားချက် ၄-၆ ကိုတည်ထောင်ရန်ကူညီပါ။
၈။ D&B ၏ချေးငွေများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါ။
2. ခရက်ဒစ်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်ယင်း၏တွဲဖက်များကတောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်ပါ။
၃။ ကုမ္ပဏီ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ။ နှင့် / သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်ပြီးစီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ပါ။
သက်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ကော်ပိုရေးရှင်း၊ LLC သို့မဟုတ်အခြားအလားတူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ၀ ယ်သူ၏စားသုံးသူများ၏တစ် ဦး တည်းသောအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မည်သည့်အလုပ်သမားသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြန်လည်ရောင်းချသူများ၊ တတိယပါတီသတင်းအချက်အလက်ပေးသူများ၊ ကုန်သည်များလိုင်စင်များသို့မဟုတ်၎င်းကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများသည်မည်သည့်အာမခံချက်မဆို၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကုန်ကြမ်းကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းမှရရှိနိုင်သည့်ရလာဒ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်အာမခံချက်ကိုမဆိုသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းရုံးများမှကုန်သွယ်မှုနှင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဒီသဘောတူစာချုပ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တခြားအသုံးဝင်တဲ့အသုံးအနှုန်းများ။ ဒီကိစ္စမှာနှောင့်နှေးမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်စေ၊ ငွေချေးသူတစ် ဦး ကိုရှာဖို့မတတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်စေမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမပါ ၀ င်ပါ။ အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးချင်တဲ့ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်အချက်များမှအောက်ပါအတိုင်းပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်ချေးငွေများစီစဉ်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ချေးသူမဟုတ်သကဲ့သို့ကုမ္ပဏီသည်လည်းတာဝန်မရှိပါ။ ကုမ္ပဏီသည်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သုံးစွဲသူသည်ချေးငွေရရှိရန်နှင့်သုံးစွဲသူမှလိုချင်သောချေးငွေရရှိရန်အတွက်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကိုအသုံးပြုရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ အသက်အရွယ် / ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ၏ EIN OR အခွန် ID နံပါတ်သည်ကုမ္ပဏီ၏သက်တမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်ပြီးမကြာမီကရရှိခဲ့သည်။
အကောက်ခွန်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မဆိုအကောက်ခွန်အဖွဲ့မှပြုလုပ်သောတောင်းဆိုမှုများ၊ သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို၊ ပုံစံမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူကုမ္ပဏီအားလုံး၏တစ် ဦး တည်းသောစုပေါင်းတာဝန်ယူမှု။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကုမ္ပဏီ၏ပေးဆပ်မှုနည်းပါးသောကုန်ကျစရိတ်များ။ အထက်ဖော်ပြပါ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၀ ယ်ယူသူပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးကုမ္ပဏီမှသင့်တော်စွာဖြည့်စွက်ထားသောကြိုဆိုသည့် packet ကိုလက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ မှ ၁၈၀ အထိကြာနိုင်သည်။
အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ခွဲဝေချေးငွေဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် ၀ ယ်ယူသူသည်ခရက်ဒစ်အစီရင်ခံရေးကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအားမှန်ကန်သောအချိန်မတိုင်မီအထိနှင့်ကုမ္ပဏီ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲသဘောတူရန်သဘောတူသည်။ ၀ ယ်ယူသူသည်သိသာသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိသည့်အလုပ်ရှိကြောင်းနားလည်ရန် FILE သည် FILE ကိုတင်ပြသည့်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီအားငွေလွှဲခြင်းမပြုမီ။ ခရက်ဒစ်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းသည့်အေဂျင်စီနှင့် PREMATURE FILE တင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဆက်သွယ်ရန် ကုမ္ပဏီသည်သတင်းအချက်အလက်များအားအေဂျင်စီသို့တင်ပြနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏အချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုကိုမထိန်းချုပ်ပါနှင့်၊ ထိုနည်းတူမည်သည့်အချက်အလက်များကမည်သည့်အာမခံချက်ကမည်သည့်အချက်သည်မည်သည့်အချက်သည်မည်သည့်အချက်ကိုမဆို၊ အကယ်၍ သင်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းငွေပေးချေရန်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ခရက်ဒစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများသည်ဖောက်သည်များ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တတိယပါတီကုမ္ပဏီများမှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါတို့ကိုကုမ္ပဏီသို့ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့တွင်သုညမှ ၅၀၀ ကိုးဆယ်ကိုးဒေါ်လာ၊ ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ဖွင့်ကြေး၊ ရောင်းချသူများထံမှကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်၊ STATE ပုံစံတင်သွင်းခ၊ စီးပွားရေးလိုင်စင်ကြေး၊ စီးပွားရေးဖုန်းဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဖုန်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် D & B အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေများပါဝင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရက်ဒစ်အစီရင်ခံစာအခကြေးငွေ၊ ဘဏ်၏အခကြေးငွေများနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထွေထွေထုံးတမ်းစဉ်လာအရအခြားအခကြေးငွေများ။ အထက်ဖော်ပြပါအရာများသည်စီးပွားရေးလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသူမည်သူမဆိုမျှော်လင့်ရမည့်အခကြေးငွေများဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်သူ / သူမသည်ဤကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ကုမ္ပဏီနှင့်စေ့စပ်သေချာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ကိုကုမ္ပဏီမှတောင်းဆိုသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်ကုမ္ပဏီအားလိုအပ်သည်အားလုံးကိုနားလည်သဘောတူသည်။ ထို့အပြင်ဖောက်သည်သည်ဤသဘောတူစာချုပ်သက်ရောက်နေ သ၍ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုမ္ပဏီ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထားရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် ၀ ယ်သူသည်အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်၊ ဒီကုမ္ပဏီကိုဒါညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းဒီနည်းကို DEROGATORILY ထိခိုက်နစ်နာပရိုဖိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ဖောက်သည်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏စီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေတောင်းခံလွှာ / အကောင့်များအားလုံးကိုအကြွေး၊ ခရက်ဒစ်ကတ်၊ လည်ပတ်သောအကောင့်များနှင့်ချေးငွေများအပါအ ၀ င်အားလုံးကိုအချိန်မီပေးရန်သဘောတူသည်။ ဖောက်သည်သည်ကုမ္ပဏီသို့ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲအကြွေးမယူရန်သဘောတူသည်။ ၀ ယ်ယူသူကမူကုမ္ပဏီအားအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ငှားရမ်းခြင်း၏စုစုပေါင်းချေးငွေပမာဏသည် ၀ ယ်ယူသူနှင့်ကုမ္ပဏီ၏စုပေါင်းအားထုတ်မှုဖြစ်သည်ဟုသဘောတူသည်။
ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အချိန်နှင့်အခါအားလျော်စွာသဘောတူညီမှုကိုအချိန်မရွေး၊ အချိန်မရွေးပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီမှလက်ခံသည့်အခါနှင့်သင့်လျော်သော https: // companiesinc ၏စာမျက်နှာခွဲတွင်ထုတ်ဝေသည့်အခါဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အလိုအလျောက်ထိရောက်လိမ့်မည်။ .com / သို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သောနောက်ဆက်တွဲတည်နေရာ။
သင်၏အမည်သို့မဟုတ်သင်သတ်မှတ်ထားသောသူသည်ကုမ္ပဏီအားသင်သို့မဟုတ်သင့်အားသတ်မှတ်ထားသောကုမ္ပဏီသို့လွှဲပြောင်းပေးသောစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏အမည်သို့မဟုတ်သင့်အားခန့်အပ်ထားသည့်အဖွဲ့သည်ဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆောင်းပါးများတွင်ပါ ၀ င်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ သင်သို့မဟုတ်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသူအားကုမ္ပဏီအားလွှဲပြောင်းပေးသောသီးခြားစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ကားပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ၏အမည်နှင့်ညီမျှသည်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်များသည်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်။ နှင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီကိုစည်းရုံးရေးမှူးအဖြစ်ဖွဲ့စည်း ?? ထို့နောက်သင့်အားကုမ္ပဏီအားလွှဲပြောင်းပေးသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသောသူသည်ကုမ္ပဏီ၏ကန ဦး အရာရှိ၊ ဒါရိုက်တာ၊ အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မန်နေဂျာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီအားသင့်အားလွှဲပြောင်းခြင်းသည်ဆောင်းပါးများကိုယ်နှိုက်မဟုတ်ဘဲလွှဲပြောင်းစာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်သာပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုသင်သဘောတူသည်။
မေးလ်ပို့ခြင်းပါ ၀ င်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသင်မှာထားပါကသင်ပို့သောပစ္စည်းများအတွက်စာပို့ခနှင့်ငွေပေးချေမှုကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏စာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်သို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောငွေသွင်းခြင်းကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ဤသိုက်အားသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သက်တမ်းတိုးပါမည်။ ထုပ်ပိုးမှုများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးအုပ်ရန်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုဖိုင်ပေါ်တွင်အားသွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းသင်ခွင့်ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံနိုင်သည့်သင်၏အမှာစာနှင့်ဆက်စပ်သောအပိုဆောင်းအခကြေးငွေများရှိနိုင်သည်။ သက်တမ်းတိုးခသို့မဟုတ်အခြားအခကြေးငွေများသို့မဟုတ်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်သင်၏ထုတ်ဝေမှုမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့သတိထားမိခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ဆောင်ကုန်ကျစရိတ်များပိုမိုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အပိုဝန်စည်စရိတ်များဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများကို update လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနှင့်ဆက်စပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိလိပ်စာများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကောင်းရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးသောကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များသည်စီးပွားရေးအချက်အချာနေရာတစ်ခုတွင်မဟုတ်ဘဲဝေးလံခေါင်သီသောလူနေအိမ်ရာနေရာများတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အချို့သောလိပ်စာများကိုစာရင်းပြုစုထားပြီးအဆောက်အအုံ၏ဓာတ်ပုံများအပါအ ၀ င်ဓာတ်ပုံများကိုသမိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြသထားပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုကိုယ်စားမပြုပါ။ စာပေးစာယူမပို့မီသင့်လျော်သောလိပ်စာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ရှေ့နေလီမိတက်သည်မူလကအမေရိကန်နိုင်ငံနီဗားဒါးတွင် ၁၉၆၃ ခုနှစ်၌ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိပိုင်ရှင်များသည်နှစ်နှစ်၊ ရှစ်နှစ်တွင်တတိယမြောက်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၄ ​​င်း၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မပါဝင်ခဲ့ပေ။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ပြောင်းသွားပြီးကုမ္ပဏီအားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအဖြစ် LL ၏အသက်အရွယ်ကိုအားမကိုးရန်သင်သဘောတူသည်။ ဤသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးသည်ပါတီများအကြားလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဤသဘောတူညီချက်အောက်တွင်ပေးထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပြောင်းလဲရန်သင်သဘောတူသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုသည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောမူကိုတင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသဘောတူခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ် (သို့) ပုံမှန်စာဖြင့်သင့်အားအသိပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများကိုသတိပြုရန်ဤသဘောတူညီချက်အပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်သဘောတူသည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပြောင်းလဲခြင်းကိုသတိပြုမိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုလိုက်နာကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
ဤသဘောတူညီချက်နှင့်ဤသဘောတူညီချက်အားဖောက်ဖျက်သော ၀ န်ဆောင်မှု (များ) နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်တစ်ခုလုံးနှင့်သင်၏သီးသန့်ဆေးတစ်လက်လုံးကိုသင်သဘောတူကြောင်း ၀ န်ဆောင်မှု (များ) အတွက်သင်ပေးချေသည့်ပမာဏကိုသာကန့်သတ်ထားသည်ကိုသင်သဘောတူသည်။ LL သည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့) အစားထိုး ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောပြည်နယ်များ၊ ပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တိုင်းပြည်များသည်နောက်ဆက်တွဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုချန်လှပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းများကိုခွင့်မပြုတဲ့အတွက်၊ ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်များ၊ ပြည်နယ်များနှင့်နိုင်ငံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားဟာဥပဒေကခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိကန့်သတ်ထားသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့သည်ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုလုပ်ရ၊ သင်၏အမှာစာကိုမပေးပို့မီသင်၏ကုမ္ပဏီအမည် (များ) ၏စာလုံးပေါင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ။
LL အနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ကိုမဆိုငြင်းပယ်သည်။ သို့သော်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါက (၁) ဝင်ရောက်ခွင့်နှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြတ်တောက်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှု၊ (၂) အချက်အလက်မပေးပို့ခြင်း (သို့) အချက်အလက်လွဲမှားခြင်းကြောင့်ရရှိသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှု၊ (1) ဘုရားသခင်၏အပြုအမူများမှရရှိလာတဲ့အရှုံးသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှု; (၄) ဤသဘောတူစာချုပ်အရပေးအပ်ထားသောမည်သည့်အချက်အလက်နှင့်မဆိုအမှားအယွင်းများ၊ ပျက်ကွက်မှုများသို့မဟုတ်လွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှု။
မှတ်ပုံတင်သူ၏ကုမ္ပဏီအမည်အားမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း၊ စီးပွားရေးပြတ်တောက်ခြင်း (သို့) အမြတ်အစွန်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်သွယ်ဝိုက်၊ အထူး၊ ဖြစ်ပျက်မှုသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါဟုသင်သဘောတူသည် ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အရေးမယူမှုအပါအ ၀ င်သော်လည်းကောင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားတိုင်ပင်လျှင်ပင်ဖြစ်စေအရေးယူပါ။
အေးဂျင့်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ပိုင်ရှင်များနှင့်ဆက်စပ်သူများအားရှေ့နေခ၊ ဤသဘောတူညီချက်အရသို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်လာသောရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်ရှေ့နေ၏အခကြေးငွေများအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့အားလွှတ်ပေးရန်၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) သင်အားမည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း၏အခြားသောစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးကိုမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းအပါအဝင် ။ အကယ်၍ LL သည်တတိယပါတီမှတရားစွဲဆိုမှုနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခံရပါကကျွန်ုပ်တို့အားလျော်ကြေးပေးရန်သင်၏ကတိတော်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်ထံမှစာဖြင့်ရေးသားထားသောအာမခံချက်များကိုတောင်းခံလိမ့်မည်။ ထိုအာမခံချက်များကိုမပေးနိုင်ပါကသင်၏သဘောတူညီချက်အားဖောက်ဖျက်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
LL သည်မျှတပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းကိုရှာဖွေသည်။ LL သည်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲအချိန်တွင်၎င်း၏စျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကန ဦး ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုပြီးဆုံးချိန်တွင်စီးပွားရေးပုံစံတစ်ခု၏သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက်နှုန်းတစ်ခုနှုန်းကိုကိုးကားနိုင်သည်။ သို့သော်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအစိုးရအခကြေးငွေသို့မဟုတ်အိတ်ဆောင်ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်သို့မဟုတ်အခြားအရာများအတွက်ကြောင့်သက်တမ်းတိုးမှုကြောင့်နောင်အနာဂတ်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်များ။ LL မှပြုလုပ်သောပြိုင်ဘက်များ၏စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပြီး / သို့မဟုတ်အနိုင်ရသည်ဟုကြေငြာချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြိုင်ဘက်၏စျေးနှုန်းကိုပုံမှန်ရိုက်နှက်ပြီး LL ၏တစ် ဦး တည်းသောရွေးချယ်မှုဖြင့်ပြိုင်ဘက်များ၏စျေးနှုန်းကိုကျော်ဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ LL သည်ရောင်းချမှုပြီးဆုံးပြီးနောက် LL နှင့်ပြိုင်ဘက်များ၏စျေးနှုန်းများအကြားခြားနားချက်ကိုပြန်အမ်းရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းတို့သည်ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုကန့်ကွက်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသင်သဘောတူသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ထားခြင်းကိုသင်အားမကိုးစားနိုင်ပါ။ သင်မူလ၊ ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှစာရွက်စာတမ်းများကိုတံဆိပ်ခေါင်းများလက်ခံရရှိသည်အထိသင်၏အမှာစာစီးပွားရေးကတ်များ၊ ။ (ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောပြည်နယ်များ၊ ပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တိုင်းပြည်များသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်“ လက်မှတ်” ထုတ်ပေးလိမ့်မည်)
သင်၏အဖွဲ့အစည်းအမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏အသိပညာနှင့်ယုံကြည်မှုအရှိဆုံး၊ တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံပြီးသင်နှင့်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုအနာဂတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်မီပေးလိမ့်မည်ဟုသင်သဘောတူသည် ထိုအခြိနျ၌အရပျ၌ပြုပြင်မွမ်းမံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီထုံးစံ။ အကယ်၍ သင်၏အမိန့်ကိုကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့်ပေးမည်ဆိုပါကသူသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောကုမ္ပဏီ၏အမည်၊ သင်၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာရေးရန်သူသို့မဟုတ်သူမကြိုးပမ်းအားထုတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်လွဲမှားစွာအဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှုများဖြစ်ပေါ်သည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအမှားများသို့မဟုတ်အလွဲအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုအတွက် LL အန္တရာယ်ကင်းကိုင်ထားပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့သတင်းအချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားတိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်ဖြစ်စေစာဖြင့်ရေးသားပေးပို့ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးပြုခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှု (မ်ား) ကို“ ရှိသကဲ့သို့”၊ “ ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောမည်သည့်အာမခံအမျိုးအစားကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းငြင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ - သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အချိန်မီ၊ လုံခြုံမှုရှိမည်သို့မဟုတ်အမှားကင်းလိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောရလာဒ်များနှင့်ရရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှုသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းအမည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအားငြင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်စာရင်းသွင်းရန်ငြင်းဆန်ပါကသင်၏သက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေများကိုပြန်အမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ငြင်းဆန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
ဤသဘောတူစာချုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားလုံး ၀ နှင့်သီးခြားသဘောတူညီချက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည်ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ အလေ့အကျင့်များ၊ ပေါ်လစီများ၊
ဤသဘောတူစာချုပ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် ၀ င်ရောက်ပြီးယင်းကိုဥပဒေစည်းမျဉ်းများရွေးချယ်ခြင်း မှလွဲ၍ ဖလော်ရီဒါဥပဒေများနှင့်အညီအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည်။ ဤသဘောတူညီချက်ပါ ၀ င်သူတိုင်းသည်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိဘားဒါးကောင်တီတွင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးများ၏သီးသန့်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလက်အောက်ခံပြီးထိုတရားရုံးများအားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၊ နေရာ၊ ဤသဘောတူညီချက်အားပြto္ဌာန်းရန်မည်သည့်အရေးယူမှုမဆိုလုပ်နေသောပါတီသည်တရားမျှတသောတရားရုံးကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ရှေ့နေအခကြေးငွေများခံစားခွင့်ရှိသည်။
ဤသဘောတူစာချုပ်သည်သင်နှင့် LL အကြားရှိသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုပြီးသင်နှင့် LL အကြားနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေမည်သည့်ကြိုတင်သဘောတူညီမှုကိုမဆိုအစားထိုးသည်။
- ရှေ့နေလီမီတက်လီမိတက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုသင်၏ပုံစံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
4699 N. ဖက်ဒရယ် Hwy, Suite 101
Pompano သဲသောင်ပြင်, FL 33064
သေဆုံးသူ - အခမဲ့: + 1-888-234-4949
တိုက်ရိုက် / Int'l: + 1-661-310-2930
အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရန် - ဤစာမျက်နှာတွင်ပြည့်စုံသောစုံစမ်းရေးပုံစံ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 23, 2021 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်